Android OS ပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် လူသိများသော မြန်မာယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်များ
Myanmar Unicode Keyboard တွေကိုစုစည်းပေးထားပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Keyboard ကိုရွေးချယ်၍ စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ Up To Date ဖြစ်စေရန် Google Play Store လင့်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ TTKeyboard – Myanmar Keyboard https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myopenware.ttkeyboard.latin iOS တွင် နာမည်ကြီးကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခင်က iOS အတွက်သာ ထွက်ရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် Android အတွက်ပါ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာစာသင်ပုန်းကြီးအတိုင်း စာရိုက်နိုင်ပြီး နှစ်ချက်နှိပ်စနစ် ပါဝင်သည့်အတွက် Shift key နှိပ်စရာမလိုဘဲ လျှင်မြန်စွာ ရေးသားနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဇော်ဂျီမှ မြန်မာယူနီကုဒ်စနစ်သို့ ကူးပြောင်းကာစလူများအတွက်လည်း ဇော်ဂျီစာရိုက်သည့်အတိုင်း ရေးသားနိုင်သည့် ယူနီကုဒ်လက်ကွက်ကိုပါ ထည့်ပေးထားသဖြင့် မြန်မာယူနီကုဒ်စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် အသုံးဝင်သောကီးဘုတ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ M3 Keyboard https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ4vNi7ZxtotROC0RjRbcJRB0pGhyhfSxAz7 စာရိုက်နိုင်ရန် လက်ကွက်နှစ်မျိုး ထည့်ပေးထားသည်။ တစ်မျိုးမှာ မြန်မာသင်ပုန်းကြီးအတိုင်း စာရိုက်နိုင်သည့်
ဇူလိုင်လတွင် ထွက်ရှိလာမည့် MIUI 8 Update တွင် Split-Screen လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်လာဖွယ်ရှိ
အချိန်အတော်ကြာကြာ မွမ်းမံမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် MIUI ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခု ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ၂၅ ရက်နေ့က Xiaomi ဟာ Mi Max2ကို ပွဲထုတ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသူတွေ မျှော်လင့်တောင်းဆိုနေကြတဲ့ 'Split-screen' လုပ်ဆောင်ချက်ကို Mi Max2မှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီးနောက် နောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာမယ့် MIUI 8 အပ်ဒိတ်တွေမှာလည်း မိတ်ဆက်ထည့်သွင်းပေးသွားနိုင်ခြေ ရှိလာပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးအပ်ဒိတ်ကတော့ လာမယ့် ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးအပတ်လောက်မှာပါ။ အခြားသော Android UI တွေမှာတော့ Android7ကစပြီး Split screen လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ကြပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ‌Xiaomi အနေနဲ့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးတာဟာ နောက်တောင်ကျနေသေးတယ်လို့ ထင်စရာဖြစ်နေပါပြီး ဒီလိုပါဝင်လာဖို့အတွက်လည်း မီယူအိုင်သုံးစွဲသူတွေဟာ နှစ်ဝက်လောက် တောင်းဆိုမှုတွေ၊ ဖိုရမ်ထဲမှာ ဆန္ဒကောက်ခံမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ Developer team ကနေ ဒီလိုတောင်းဆိုမှုတွေ၊ မေးခွန်းတွေကို ဖိုရမ်ကနေ တရားဝင် တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Xiaomi ရဲ့ MIUI Developer Te
Zawgyi or Unicode Hybrid for iOS
update 1. minor fix & ttf font to test on android For iOS 👇👇👇👇👇 http://www.mediafire.com/file/8akusaoyof70oov/mm3_20-Jan-2011-c10.mobileconfig ttf 👇👇👇👇👇 http://www.mediafire.com/file/x8tx9a4z7eybhd6/mm3_20-Jan-2011-c10.ttf ==================================================================== Zawgyi or Unicode Hybrid ? ယူနီကုဒ် ဖေါင့်ထည့်ထားသူ အသုံပြုသူများအတွက် ဇော်ဂျီဖေါင့်နဲ့ ရေးထားတာတွေကို ဖတ်ဖို့ရာဆိုရင် hybrid font တွေက ကူညီပေးပါတယ် hybrid တွေဟာ ၈၀ ၉၀% လောက်မှန်တယ် ဆိုပေမယ့် စစချင်းဆို ဖတ်ရမလွယ်ပါဘူး တချို့စာလုံးတွေက စာလုံး ၂ ထပ်လို အောက်ရောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်၊ ဖတ်နေကျသွားရင်တော့ စဉ်းစား ဖြည့်ဖတ်သွားလို့ရပါတယ်၊ (ဇော်ဂျီတစ်ခုထဲသုံးသူများ/ထည့်ထားရင်တော့ ယူနီနဲ့ရေးထားတာတွေဆို အတည့်ဖတ်မရတော့ပါဘူး) အခုဖေါင့်လေးက ရှိပီးသားကိုဘဲ နဲနဲပြင်ဆင်ပီး စာလုံး အပေါ်ရောက်အောင် လုပ်ထားပေးပါတယ်။ ဒီအတွက် စာလုံး ၂ ထပ်နေရာတွေမှာတော့ ဖတ်ရ ပြဿနာရှိလာပါလိမ့်မယ်၊ တက္ကသိုလ်ကို တကကသိုလ် စသည်ဘဲ ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် နောက်အောက်ပါ ပြဿနာလေးတွေ ရှိပေမယ့် ယခင်ကထက
ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဓာတ်ပုံကို တစ်ပါတည်း ဘယ်လိုရိုက်မလဲ
၁။ ဆက်တင်များကိုဖွင့်ပြီး စနစ်အက်ပ်များထဲကို ဝင်ပါ။ ၂။ ကင်မရာအက်ပ်ကို ရွေးပါ။ ၃။ ပုံထဲမှာ ပြထားသလို "အသံဖမ်းယူနေစဉ် ပုံရိုက်ကူးပါ" (Image Capture While Recording) ဆိုတာလေးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ၄။ ဒါဆို ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက် ကင်မရာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ပုံထဲမှာပြထားသလို ဗီဒီယိုရိုက်နေတုန်းမှာပဲ ဓာတ်ပုံပါ တစ်ပါတည်းတွဲရိုက်လို့ရမယ့်ခလုတ်လေးတစ်ခုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဗီဒီယိုရော ဓာတ်ပုံပါ တစ်ပြိုင်တည်း မှတ်တမ်းရယူလို့ရသွားပါပြီ။ Original Thread 👇👇👇👇👇 http://en.miui.com/thread-616256-1-1.html
Android OS အတွက် Myanmar TTS (Voice Speak apk) Beta 1.0 ထွက်ရှိ
Android OS သုံး စက်ကိရိယာများပေါ်တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော စာများကို အသံထွက်ဖတ်ပြပေးနိုင်သည့် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Text to Speech (TTS) ဆိုတာ စက်ကိရိယာတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ‌ရေးထားတဲ့စာတွေကို အသံထွက်ဖတ်ပြပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Speech to Text (STT) ကတော့ သုံးစွဲသူက ပါးစပ်ကနေ ပြောလိုက်တဲ့စကားကို စာသားအနေနဲ့ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ TTS နဲ့ STT ကို အသုံးပြုရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ အများကြီးပါ။ စာဖတ်သူတို့ Iron Man ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ Tony Stark ကနေ သူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ Jarvis လို့ခေါ်တဲ့ AI (Artificial Intelligence) ကို အသုံးပြုပြီး သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ခိုင်းစေတာ မြင်ဖူးကြမှာပါ။ Jarvis ဆိုတာ AI တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် Tony ခိုင်းတာကို လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ Tony အသံကို မှတ်မိနေမယ့် Speech recognition နဲ့ Speech ကို အခြေခံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး Jarvis ဘက်က ဆက်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့က အခြေခံအနေနဲ့ TTS နဲ့ STT engine လိုပါတယ်။ ဒါ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပေးတာပါ။ ယူနီကု
MIUI ရဲ့ Remote Assistant ကို အသုံးပြုခြင်း
သူ့နာမည်ကိုက Remote assistant လို့ ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာဖြစ်ဖြစ် MIUI နဲ့ပက်သက်ပြီး အကူအညီလိုအပ်လာခဲ့ရင် သင်က အဝေးကနေ လှမ်းပြီး ကူညီပေးနိုင်မယ့် China Rom မှာ ပါတဲ့ အက်ပ်လေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ဖုန်းကို ပုံမှန်လေး Facebook အသုံးပြုရုံ၊ စာဖတ်ရုံ၊ ဖုန်းဆက်ရုံလေးပဲ အသုံးပြုတတ်တဲ့သူတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဖုန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ကလိတာ ဘာညာတွေကို မသိကြပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ဖုန်းမှာ ကြုံလာရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခုကို သူတို့ကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဝေးကနေပဲ လှမ်းပြီး‌ သူတို့ဖုန်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါပြီ။ အဲ့လိုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အခြားအက်ပ်တွေကို သပ်သပ်ထပ်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကဲ ..... ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ အက်ပ်အိုင်ကွန်ကို နှိပ်လိုက်ရင် အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲကလို သင်က အကူအညီလိုချင်တာလား၊ သင်က သူများကို ကူညီပေးမှာလားဆိုပြီး မေးတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သင် ဘာကိုပဲနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်၊ တစ်ခုခုကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့
MIUI9ဟာ Split-screen feature ကို သယ်ဆောင်လာမယ့် နောက်ထပ်အဓိက Update ဖြစ်လာမလား
MIUI9ဟာ အခုလောလောဆယ် တည်ဆောက်ဆဲအဆင့်မှာပဲ ရှိနေပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ ဒုတိယနှစ်ဝက်လောက်ထဲမှာ ထွက်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ MIUI အသုံးပြုသူတွေကလည်း နောက်ထပ် ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ MIUI ကနေ App developer တွေဆီကို ပို့ပေးတဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင်ဟာ သိပ်မကြာသေးတဲ့အချိန်က မတော်တဆ ပေါက်ကြားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအီးမေးလ်ထဲမှာတော့ နောက်ထွက်ရှိလာမယ့် MIUI9မှာ Split-screen Multitasking feature ပါဝင်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပါပါတယ်။ (မေးလ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို Post အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ သပ်သပ်ရေးပေးပါ့မယ်။) လောလောဆယ် ထွက်နေတဲ့ ကောလဟာလတွေအရတော့ Android 7.0 နဲ့အထက် စက်တွေမှာပဲ Split-screen feature ကို ထောက်ပံ့ပေးဦးမှာပါ။ Mi 6, Mi 5c, Mi MIX, Mi Note 2, Mi Pad 3, Redmi 4X, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Mi 4c, Mi 4s, Mi 5, Mi 5s Plus, Mi MAX တို့ဟာ အဲ့ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုနိုင်မယ့် ပထမဆုံးအသုတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MIUI Developer တွေဟာ Android 6.0 နဲ့စက်တွေမှာပါ အသုံးပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြတဲ့အတွက် နောက်ထပ်စက်တော်တော်များများလည်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် အလားအလာ
အပြင်က App တွေ ထပ်သွင်းစရာမလိုတော့တဲ့ MIUI 8 မှာပါဝင်ပြီးသားလုပ်ဆောင်ချက်များ
1. Currency Converter (ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း) MIUI 8 မှာ ပါဝင်လာတဲ့ MIUI Calculator ဗားရှင်းအသစ်မှာဆိုရင် နိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်း‌တွေကို တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်တည်းမှာ နိုင်ငံသုံးခုရဲ့ ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းထားတွေကို တစ်ပြိုင်တည်း တွက်နိုင်၊ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းထားတွေ သိရဖို့အတွက် အပြင်က အက်ပ်သီးသန့် သပ်သပ်ထပ်ထည့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ 2. Image Editor (ဓါတ်ပုံများကို အသေးစားပြုပြင်ခြင်း) MIUI 8 မှာဆိုရင် Gallery ထဲမှာရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို အသေးစားပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်လေး‌တွေ ပါလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသေးစားဓါတ်ပုံပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ (ဥပမာ - Effect တွေထည့်တာ၊ ဓါတ်ပုံပေါ်မှာစာရေးတာ၊ ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ ရုပ်ပြောင်လေးတွေ ထည့်တာ၊ ခဲတံလေးနဲ့ လျှောက်ခြစ်တာလေးတွေအတွက်) အပြင်က အက်ပ်သီးသန့် ထပ်သွင်းစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ 3. Video Editor (ဗီဒီယိုတွေကို အသေးစားတည်းဖြတ်ခြင်း) MIUI 8 မှာ ဗီဒီယိုတွေကို အသေးစားပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုတွေ လုပ်ဖို့ အပြင်‌ကနေ ‌အက်ပ်သီးသန့်ထပ်ထည့်စရာ မလိုတော့တာက